Anụmanụ nke Amazon: njirimara na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n’ime ahịhịa dị n’elu ụwa dum a na-ahụta dịka “nkuume” nke ụwa bụ Amazon. Ọ bụ oghere sitere n'okike na oke ọhịa ebe oke nde mmadụ bi na ya, ọtụtụ n'ime ha amabeghị taa. Ihe ndi di ndu di iche-iche bu ihe ngosi nke odighi ndu na ikike ikwado ndu. Ya mere, na amazon fauna Ọ ghọwo ihe a na-amụ ọtụtụ nyocha n ’ụwa niile.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara anụmanụ nke Amazon.
1 Anụmanụ Amazon
2 Mmetụta na flora na anụmanụ nke Amazon
3 Nnụnụ na ihe na-akpụ akpụ
4 Ampia na mamm
E nwere ọtụtụ ụdị ndị a na-amabeghị ebe ọ bụ na ha dị oke obibi ma jupụta na ndụ. Enwere ụdị osisi buru ibu enyere ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ iru mmiri dị. Ejirimara na ihu igwe okpomoku kacha oke mmiri ozuzo n'ime afọ na oke iru mmiri. Ihe mgbanwe ndị a nke ikuku na-enye ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa iji kwalite mmepe nke ndụ.
Anyị hụrụ na ahịhịa na anụmanụ nke Amazon bụ otu n'ime isi iyi kachasị ndụ na mbara ụwa niile. Ohia Amazon bukwa ihe dika umu umu ahụhụ 2.5 nde, otutu iri puku umu osisi na ihe dika nnunu na anumanu 2.000. Ruo taa, achọpụtala ha ma ọ dịkarịa ala ụdị azụ 2.200, nnụnụ 1.300, anụ na-enye ara narị abụọ na iri anọ na asaa, anụ mmiri amphibian 427 na anụ na-akpụ akpụ 428. Ọkà mmụta sayensị bụ ndị na-achọpụta ma kewaa ụdị anụmanụ ndị a dabere na njirimara na ebe obibi ha.
Otu n’ime ụdị azụ ise ọ bụla maara na ọ na-ebi n’osimiri na iyi ndị Amazon. A makwaara na n'otu oke ahụ enwere ụdị nnụnụ si n'akụkụ ụwa niile bi na oke ọhịa nke Amazon. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụwa dum, anyị nwere ike ịhụ anụmanụ ndị bi ebe ndị a. Nke a bu ihe puru ime na otu n'ime umu anumanu iri a maara ebe obula n'uwa bi n'ime oke ohia Amazon. Ihe omuma ndi a mere ka Amazon nwere otutu umu anumanu na osisi n'uwa.
Mmetụta na flora na anụmanụ nke Amazon
Mmadu na - ebute otutu otutu ihe okike ebe o choro iweputa ihe ndi ozo. Nsogbu a bi mgbe mmịpụta nke ihe onwunwe karịrị ọsọ nke nrụpụta ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere oke ojiji nke ihe okike. A na-ahụ anụmanụ nke Amazon emetụta nke ukwuu ruo ọtụtụ iri afọ site na omume mmadụ. Ma ọ bụ na maka mmịpụta nke akụ ndị sitere n'okike na-agbanwe gburugburu ebe obibi ruo n'ókè ọ na-emebi. Usoro okike mebiri emebi na-ejedebe nkewa na ibelata ogo gburugburu ebe obibi, nke mere na ihe ndi mmadu enweghi ebe obibi ha ga-etolite.
Otu ihe kachasị emetụta gburugburu ebe a bụ oke ohia. Ọkụ ọhịa ndị na-adịbeghị anya enwewokwa mmetụta dị ukwuu na anụmanụ nke Amazon ruo na mbelata nke ọtụtụ ụdị. Anu anumanu nke ebe a no na nsogbu di egwu ma otutu umu anumanu no na onwu. O siri ike inyocha oke ohia a na oke ohia nke ebe ohia nyere otutu ha n’akuko. Agbanyeghị, n'iji teknụzụ eme ihe dị mfe ịbanye n'ime ọhịa.
Nnụnụ na ihe na-akpụ akpụ
Anyị ga-enyocha ụmụ amaala Amazon niile. Anyị na-amalite site na nnụnụ ndị ahụ. Karịsịa ibi icheoku, nnụnụ hummingbir, toucans, raptors na nza. Ihe kachasị ewu ewu nke usoro okike a bụ macaws. A maara ha nwere nku na-acha anụnụ anụnụ na onu okuko.
Toucans bụ nnụnụ ndị bi n'oké ọhịa Amazon ma ọ bụ otu n'ime ụdị kachasị gbasasịrị ebe ndị a. Todị toucan kachasị baa ụba bụ nke nwere akwa ojii, akpịrị na-acha ọcha na ogologo oroma oroma nwere ntụpọ ojii n'ọnụ ya. Dị nnụnụ ndị ọzọ bụ ugo siri ike nke na-akpa ike nile nke ọma. N'ime nnụnụ ndị na-ehi ụra anyị nwere ikwiikwii a na-ahụ anya nke nwere ahụ ọcha na isi ojii.
Banyere anụ na-akpụ akpụ, anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị. N'etiti ndị kasị ewu ewu bụ boas, iguanas na nduru. Onye anakpo aha nke iguanas bu igu iguana. Inwe ụba nke juru ebe niile ọbụlagodi na ndọrọ n'agha. Turtles dịkarịsịrị na ị nwere ike ịkọ aha mbe dị ka nke nwere ụkwụ edo edo na oke buru ibu.
Ampia na mamm
Ndị Amphibia agbasawo na anụ ọhịa Amazon. Imirikiti anụmanụ ndị a na-egbu egbu, mana ọ na-adị mfe ịmata n'ihi ekele ha na-enwu gbaa. Agba a dọrọ ndị na-eri anụ aka na ntị banyere ụdị nsi ha nwere ike inwe. Otu n'ime amphibians ndị a maara maka nsi ya bụ frog ọla edo. A na-ahụta ya dịka amphibian kacha egbu egbu n'ụwa. E nwere ụdị frog ndị ọzọ enwere ike ịba ihe ruru cm abụọ karịa.
N’aka nke ọzọ, anụmanụ ndị na-agbasasịkarị n’ọhịa mmiri ozuzo Amazon bụ enwe na enwe. Mondị enwe kachasị ewu ewu bụ enwe enwe anụ ọhịa. N'ime ụdị a enwere ọtụtụ ụdị. Ihe njiri mara ya bu oku n’enye ya aha ya. Ọdụ ya bụ prehensile ma nwee ọhụụ yiri nke mmadụ. Banyere felines, e nwere ụdị asaa dị iche iche, nke ọ bụla nwere ụdị okike ya. Kwụpụta na puma, na jaguar, ocelot, margay, colocolo, n'etiti ndị ọzọ.
Fọdụ ụdị anụmanụ ndị na-eri anụ na-eri nri na anụ ọhịa nke Amazon bụ anụ ọhịa bekee na tayra. Anumanu a nwere uzo ma nwekwaa odi ka onu ogwugwu. E nwekwara ụfọdụ ụdị artiodactyls, ebe anyị na-ahụ mgbada, ehi, atụrụ na ezì.
Ọ bụrụ na anyị agaa na mpaghara okike ndị dị n’osimiri ahụ, anyị ga-ahụ ọtụtụ oge dịka dolphins mmiri, azụ discus, azụkọ ajụjụ, wdg. N'ikpeazụ, n'inyocha ụmụ ahụhụ na arachnids, anyị ga-ahụ ọtụtụ ụdị ahụhụ dị ka mite, aesụ, beps, enwe, ijiji, ndanda, na anwụnta. Ọtụtụ anwụnta na-ebunye mmadụ ọrịa dịka ịba.
Nnụnụ a nwere ozi a nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Amazon na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Anụmanụ Amazon